उपचार गर्ने खर्च अभावमा घरमै लडिरहेकी छन् पुष्पा ! – साँचो खबर
उपचार गर्ने खर्च अभावमा घरमै लडिरहेकी छन् पुष्पा !
२ पुस, काठमाडौं । शिकारीबास खोला नजिकै रहेको सुकुमबासी स्याउली बस्ती । जस्ता र खरले छाएको सानो झुपडी । ५२ वर्षीय एक पुरुष आफ्नी बिरामी छोरीको स्याहारसुसारमा व्यस्त देखिन्छन् । १५ वर्षीय छोरी बिरामी परेपछि दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खाने मेसो नै उनले भुलिसकेका छन् । जसका कारण उनको घरको चुलोमा नियमित आगो बल्न पनि छाडेको छ । दुवै मिर्गौला फेल भएकी १५ वर्षीया छोरी पुष्पालाई घरभित्रै रुँगेर बस्नुको विकल्प उनीसँग छैन किनभने आर्थिक अवस्था नाजुक छ ।
‘डाक्टरले पुष्पाको दुवै मिर्गौला फेल भएको छ, अब नियमित डाइलायसिस गर्नुपर्छ भन्नुभयो’, उनले भने, ‘ऋणधन गरेर लगेको १ लाख ६२ हजार सकिसकेको थियो, उपचार खर्च अभावमा बाध्य भएर बिरामी छोरीलाई घर फर्काएर ल्याउन बाध्य भयौं ।’ डाक्टरले बिरामीको अवस्था जटिल भन्दाभन्दै पनि पैसा नभएर घर ल्याउनुपरेको सोमलाल बताउँछन् ।
जंगल फँडानी गरेर बसेको सुकुमबासी बस्तीमा उनको १ कठ्ठा घडेरी र १० कठ्ठा ऐलानी जग्गा छ । सो ठाउँमा जग्गा किनबेच नै हुँदैन । छोरीको उपचार र घर खर्च चलाउन लिएको ऋणले २ लाख नाघेको रुम्बा सुनाउँछन् । ‘छोरीको उपचार गर्ने अब कुनै उपाय नै छैन, पाखुरा नबजारे खान पनि पुग्दैन,’ सोमलालले भने ।
सोमलाललाई १२ वर्ष र ६ वर्षका दुई छोरीहरु तथा ८ वर्षको एक्लो छोराको लालनपालनको जिम्मेवारी त छँदैछ । बिरामी छोरीलाई घरमा छोडेर काममा जान उनी सक्दैनन् । ज्याला मजदुरी नगरे हातमुख जोर्न धौधौ परेको उनको पत्नी गुनासो गर्छिन् ।
गत कात्तिक ११ गते सुर्ती रोप्न बारीमा गएकी पुष्पालाई एक्कासी पेट दुख्यो । त्यसअघि छरछिमेकमा समेत अर्मपर्म गर्न जाने मेहनती र स्वस्थ उनलाई त्यो दिनदेखि पखाला समेत चल्न थाल्यो । त्यसअघि कहिले पनि बिरामी नभएकी उनलाई एक्कासी पखाला चल्न थालेपछि उनको स्थानीय क्लिनिकमा उपचार र स्थानीय स्तरमा पाइने आयुर्वेदिक औषधि समेत खुवाइयो ।
तर पनि छोरीको अवस्था सुधार नभएपछि छिमेकमा नै ऋण गरेर गत मंसिर १९ गते हेटौंडामा उपचारका लागि लगेको सोमलालले बताए । हेटौंडामा उपचार सम्भव नभएपछि त्यहाँबाट सोही दिन पुष्पालाई चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर पुर्याइएको सोमलालले बताए । तर चिकित्सकले पुष्पाको दुवै मिर्गौला फेल भएको सुनाए । नियमित डाइलायसिस गर्नुपर्ने सुझाव दिए । तर उनीसँग छोरीको उपचार गर्न पैसा थिएन । बाध्य भएर सोमलालले बिरामी छोरी पुष्पालाई घर नै फर्काएर ल्याए ।
आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका सोमलाल पुष्पाको जीवन रक्षा गर्ने ठूलो इच्छा छ । तर आर्थिक अभावका कारण छोरीलाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा केही सोच्न नै सकेका छैनन् । रोगले थलिएकी छोरीको पीडा देखेर उनी आफैँ घरी रुने, घरी मुर्छा पर्ने हुन्छन् । भेट्न आउने जोकोहीलाई आफ्नो पीडा सुनाउँछन् । छोरीको उपचार गर्न आफूसँग पैसा नभएकाले मनकारी व्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहयोग गरेर आफ्नो छोरीको जीवन रक्षा गरिदिन उनले सबैसँग अनुरोध गर्छन् । तर त्यस्तो दाता नपाएको उनी बताउँछन् ।
कलिलो उमेरमा नै रोगले थलिएकी छोरीले सबैको सहयोग पाएर बाँच्न सक्छे की भन्ने उनको आशा छ । ‘एउटा छोरी त मैले पैसा नभएर नै गुमाएँ, अब अर्को छोरी पनि पैसा नभएकै कारण थलामा छिन्,’ उनले भने, ‘सबैले सहयोग गरे मिर्गौला फेरेरै भए पनि बचाउन सकिन्छ कि ?
पुष्पा घर नजिकै रहेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । आफूसँगै पढ्ने साथीहरु अहिले ड्रेस लगाएर पढ्न गएको देख्दा पुष्पा रुने गरेको सोमलाल बताउँछन् । पुष्पाको आँखाबाट झर्ने आँशुले पनि उनी साथीहरुसँग विद्यालय पढ्न जाने इच्छा देखाएको हुन सक्ने सोमलालको भनाइ छ । ‘उनका साथीहरु स्कुल गएको देख्दा पुष्पा पनि छिट्टै निको भएर विद्यालय गएको हेर्ने इच्छा छ,’ सोमलाल भन्छन् । पुष्पा पढाइमा पनि राम्रो, मिलनसार र नियमित विद्यालय आउने छात्रा रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोपीलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।
पुष्पालाई विद्यालय फर्काउँ अभियान
दुवै मिर्गौला फेल भएर थलिएकी पुष्पालाई पुनः विद्यालय फर्काउने अभियान सुरु गरिएको छ । उनको उपचारमा लाग्ने खर्च जुटाउन अभियान नै थालिएको नेपाल तामाङ घेदुङ पर्साका अध्यक्ष निमा लामाले बताए । घेदुङको पहलमा आर्थिक संकलनको काम भइरहेको र केही संकलित रकम पुष्पाको बुबालाई हस्तान्तरण गरी तत्काल पुष्पालाई अस्पताल पु¥याउन सुझाव दिइएको उनले बताए ।
Previous: चिनी मिल मालिकलाई गिरफ्तार नगर्न नेताहरुको फोन आयो : उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट
Next: उखु किसान हलो-जुवासहित प्रदर्शनमा